Alahady faha-fito Paka – 17/05/2015 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Boky mitantara ny Asan’ny Apôstôly (Asa 1,15-17.20a.20c-26)
Tamin’izany andro izany dia nitsangana teo afovoan’ny rahalahy Piera (tokony ho roapolo amby zato ny isan’izy nivory teo) ka nanao hoe: Ry rahalahy, tsy maintsy tanteraka ilay Soratra voalazan’ny Fanahy Masina tamin’ny vavan’i Davida momba an’i Jodasy, izay nitarika ny mpisambotra an’i Jesoa; fa nisantsika ihany koa izy, sady nanana anjara tamin’izao fandraharahantsika izao. Ary izany indrindra no voasoratra ao amin’ny bokin’ny Salamo hoe: Aoka ho lao ny fonenany, ka tsy honenan’olona akory; ary koa: Aoka ho lasan’olon-kafa ny anjara raharahany. Ary izany indrindra no voasoratra ao amin’ny bokin’ny Salamo hoe: Aoka ho lao ny fonenany, ka tsy honenan’olona akory; ary koa: Aoka ho lasan’olon-kafa ny anjara raharahany. Koa amin’ireo lehilahy niaraka tamintsika tamin’ny andro rehetra nitoeran’i Jesoa Tompo teto amintsika, hatramin’ny nanaovan’i Joany batemy azy ka atramin’ny andro niakarany any an-danitra, dia aoka hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelon’ny nitsanganany tamin’ny maty. Dia nanokana roa lahy tamin’izy ireo izy, dia Josefa atao hoe Barsabasy sy nampiana anarana hoe Ilay Marina, ary Matiasy, ka nivavaka nanao hoe: Tompo ô, hianao no mahalala ny fon’ny olona rehetra, ka asehoy izay voafidinao amin’izy roa lahy ireto, mba hanana anjara amin’izao fandraharahan’ny Apostoly izao, izay nialan’i Jodasy hankanesany any amin’ny fitoerany. Dia nanaovany loka izy roa lahy, ary Matiasy no nahazo ny loka, ka izy no lany ho isan’ny Apostoly roa ambin’ny folo lahy.
Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Joany Apôstôly (1 Jo 4,11-16)
Ry malala, raha toy izany no nitiavan’Andriamanitra antsika, dia tokony mba hifankatia koa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana. Fa raha mifankatia isika dia mitoetra ao amintsika Andriamanitra, ary lavorary ao amintsika ny fitiavana azy. Ny fananantsika ny Fanahiny no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary izy ao amintsika. Ary efa nahita izahay, ka manambara fa naniraka ny Zanany ho mpamonjy an’izao tontolo izao ny Ray. Na iza na iza hanaiky an’i Jesoa ho Zanak’Andriamanitra, dia mitoetra ao aminy Andriamanitra, ary izy ao amin’Andriamanitra. Ary izahay efa nahalala sy nino ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana; koa izay mitoetra amin’ny fitiavana dia mitoetra ao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 17,11b-19)
Rehefa izany dia hoy i Jesoa. Ray masina ô, tahirizo amin’ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray tahaka antsika izy. raha mbola teo amin’izy ireo aho, dia nitahiry azy tamin’ny anaranao. Eny, nitahiry izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very izy na dia iray aza, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana, mba no tanteraka ny Soratra Masina. Ankehitriny mankany aminao aho, ka manao izany fangatahana izany dieny mbola amin’izao tontolo izao, mba hananan’izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy. Nomeko azy ny teninao, ka halan’izao tontolo izao izy ireo, satria tahaka ny tsy maha-olon’izao tontolo izao ahy no tsy maha-olon’izao tontolo izao azy koa. Tsy ny hanesoranao azy amin’izao tontolo izao no angatahiko, fa ny hiarovanao azy amin’ny ratsy. Tahaka ny tsy maha-olon’izao tontolo izao ahy no tsy maha-olon’izao tontolo izao azy ireo koa. Ankamasino amin’ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana. Tahaka ny nanirahanao ahy ho ao amin’izao tontolo izao no nanirahako azy ho ao amin’izao tontolo izao koa. Manamasina ny tenako ho azy ireo aho, mba hohamasinina amin’ny fahamarinana koa izy.